Ogaden News Agency (ONA) – Qarax wayn oo ka dhacay Xagardheer iyo shir muhiim ah oy isugu yimaadeen hawl-wadeenada jaaliydaha xeryaha Dhadhaab
Qarax wayn oo ka dhacay Xagardheer iyo shir muhiim ah oy isugu yimaadeen hawl-wadeenada jaaliydaha xeryaha Dhadhaab
Posted by ONA Admin	/ January 17, 2013
Habeenimadii xalay ayaa marqudha dadka dhadhaab iyo nawaaxigeeda dagani kubaraarugeen qarax aad u tanwaynaa oo loogu talagalay in lagu gumaado dad farabadan oo shacab ah.
Qaraxan ayaa fashilmay kadib markay dhinteen nimankii doonayay in ay dhagartaas maleegaan oo iyaga laftoodii uu kuqarxay. Nimankan dhintay oo labo nin ah ayaa u dhashay qoomiyada MUKANBA oo ah qabiil kamid ah qabaa’ilada kenyakuwaasoo baryahanba shaki badan lagaqabay ayaa xalay doonayay in ay miinada galiyaa waddo ay isticmaalaan dadka shacabka ah oo ay maraan baabuurta yaryar ee magalada ka dhax shaqeeya. Dadku kudhaqan xeryaha dhadhab ayaa soo dhaweeyay faashilka kuyimid dadkii dhagar qabayaasha ahaa
Shir muhiim ah oo 3exdii biloodba mar ay isugu yimaadeen howl wadeenada jaaliyaadka xeryaha qoxootiga ee Dhadhaab faracyada xeryaha qoxootiga ee dhaca woqooyi bari Kenya ayaa la qabtay maalinamadii Talaadada ee taariikhdu ku beegnayd 14-01-2013. Shirkan oy marti loo ahaa faraca MIDNIMO ee Dhagaxlay ayaa wakhti dheer socday isagoo bilowday 9:00 subaxnimo xiliga Afrikada Bari. Waxaa sidii caadada ahayd lagu furay aayadaha qur’aanka kariimka ah iyo wacdi diini ah uu soo jeediyay sheikh Cali uu kaga waramay halganka aan ku jirno fadliga uu leeyahay iyo sida loogu baahan yahay in aan ka faa’iidaysano wakhtiga aan haysano ee dhalinyaronimo oo uu sheekhu sheegay in hadaan ku dhimanana aan jano galayno hadii noolnahayna aan xornimo helayno sidaas darteed aan haysano 2 fursadood oo qaali ah.
Intaa kadib waxaa lagudo galay ajandihii shirka oo lagaga hadlayay qodobo badan oo muhiim u ah guud ahaan bulshada S.Ogadenia iyo geedi socodka halganka ee ku aadan marxaladaha hada lamarayo.
Shirkan oo uu daadihinayay gudoomiyaha martida loo ahaa ee faraca MIDNIMO waxaa arimaha lagaga hadlay kamid ahaa amaanka, waxbarashada, iskuduubnida, doorka culimada, lajaanqaadida wacyiga hada jira iyo hormarinta halganka xaqa ah ee ay caynaanka u hayso JWXO.
Mar laga hadlayay amaanka ayaa laga dooday amaanka guud ee gayiga aan ku dhaqanahay oo ah dhul ay ku noolyihiin malaayiin dad ah oo isaga kala yimid meelo fara badan islamarkaana ay xiligan soo food saartay amaandaro. Waxaa laga hadlay amaanka gaarka ah ee khuseeya shacabka soomaalida ogadenia ee kudhaqan xeryaha oo uu cadawgu mar kasta u maleego dabin ay ku dhacaan.
Dhanka waxbarashada waxaa laga wada hadlay sidii dhalinta iyo dadka waawaynba loogu carbinlahaa sidii ay u hormarin lahaayeen waxbarashadooda oo ah mid u wanaagsan mustaqbalkooda iyo mustaqbalka wadankoodaba taaoo hoosta laga xriiqay sidii xooga loosaari lahaa wax barashadii dhanka diiniga iyo dhanna dunawigaba.
Dhinaca iskuduubnida oo ah arin mihiim u’ah umadaha dunida oo dhan ayaa carabka lagu dhuftay in ay mihiimad gaar ah u leedahay umada s.ogadenia oo ah umad dhulkoodii uu kujiro gacan gumaysi iyadoo hoosta laga xariiqay in laxoojiyo iskuduubnida hadaba jirta ee dadka s.ogadenia.
Waxaa laga hadlay doorka culima ow-diinka ay ka qaataan halganka iyadoo culimada sharafta leh ee S.Ogadenia laga codsaday in ay kaalinta mihiimka ah iyo doorka ay bulshada ku dhaxleeyihiin sii xoojiyaan dadkana uga digaan kuwa wata shaatiga diinta ee hadana la howl galaya ciidamada Hawaarinta iyagoo dadka u sheegaya in ay diin u dagaalamayaan.
Waxaa sidoo kale lafalan qeeyay wacyiga iyo marxalada hada lamarayo oo la’islaqiray in ay gabi ka laalaado siyaasada arimaha dibada eeEthiopia. Waxuu sidoo kale shirku isla qaatay sidii loo labanlaabi lahaa howlaha halganka lagu taageerayo ee kasocda gobolka WoqooyibariKenyagaar ahaa xeryaha Dhadhaab.
Howl-wadeenada ayaa ugu danbaystii soo saaray baaq, digniin, canbaarayn iyo bogaadin
Waxay howl-wadeenadu ugubaaqeen beesha caalamka iyo guwadaha shisheeye ee bixiya hubka iyo lacagta lagu gumaado shacabka aan waxba galabsanin ee reer ogadenia in ay ogaadeen wadada ay kubixinayaan deeqda ay siinayaan itoobiya.
Shirka ayaa digniin udiray kuwa u’adeega cadawga ee dhibaatada kuhaya shacabkooda kuwaas oo looga digay kusii jirka falalkan xunxun ee damiir la’aanta ah waxaana loogu baaqay inta uusan wakhtigu kadhicin in ay dadkooda dhinaca karaacaan.
Wuxuu shirku canbaaraynayaa falalka naxariis darada ah ee ay itoobiya kuhayso shacabka biri magaydada ah ee reer ogadenia
Waxaa bogaadin hawada loomariyay CWXO, golaha dhexe, howl-wadeenada jabhada, jaaliyaadka dibada, faracyada gudaha, iyo shacab waynaha reer ogadenia meel ay joogaanba oo uu shirku kutilmaamay kuwo iskadiiday in ay madaxa ulaalaadiyaan gumaysiga iyo bahdilkiisa.
Ugu danbayn shirka ayaa soo xidhmay abaare 4:00 galabnimo wuxuuna kusoo xidhmay jawidagan.
Guuleed gundiid/ONA dhagaxlay